Waxaan tijaabinay saacadda TomTom Runner Cardio | Wararka Gadget
Hore ayaan uga hadalnay sida soo dejiso oo cusbooneysii khariidadaha TomTom ee bilaashka ah Iberia maantana markale ayaan kaa yaabi doonnaa. Smartwatches waxay u yimaadaan si ay u raacaan isla dariiqa ay ku soo rogeen taleefannada casriga ah, taasi waa, in la abuuro qalab awood u leh inuu sameeyo waxyaabo badan inkasta oo ay wax yar ama aan waxba ka qabin u sheegista waqtiga. Dareenkan, safarka saacadaha casriga ah ayaa hadda bilaabmay isla markaana sharad ku dhiganaya kan ay bixiyaan TomTom Runner Cardio aad ayey uga waxtar badan yihiin isboortiga dhexdiisa.
A smartwatch ayaa noo sheegi doonta talaabooyinka, kalooriyada gubatay, masaafada safartay ama xitaa waxay na siin kartaa garaaca wadnaha laakiin wali, wali wey ka fogtahay waxa uu tababaraha maalin walba tababaraa uu ka raadsado a Daawashada cayaaraha.
1 TomTom Runner Cardio, dareenka ugu horreeya
2 Loogu talagalay in lagu raaxeysto orodka
TomTom Runner Cardio, dareenka ugu horreeya
Isla marka aan TomTom Runner Cardio ka soo qaadno sanduuqiisa waxaan ogaanay inaan la macaamilno saacad si deeqsinimo leh leh oo suunka, oo ka samaysan caag tayo sare leh oo jilicsan, u oggolaanaya hagaajin badan iyada oo loo marayo xiritaanka suunka saddex laab. Tani waxay hubin doontaa in saacaddu la jaanqaadayso wareegyo fara badan oo curcurka ah, tan ugu wanaagsanna, ma jirto fursad ay si shil ah ugu dhici karto inta lagu jiro cayaaraha (wax ku dhaca in ka badan hal nooc oo jijin firfircoon suuqa).
Marka laga hadlayo jirka saacadda, waxaa jira laba aag oo sifiican loogu kala duwanaaday wejigiisa. Dhinaca kale waxaan haysannaa shaashadda 22 x 25 mm oo leh xallil dhan 144 x 168 pixels iyo tan kale, a suufka afar-geesoodka ah waxaan u isticmaali doonnaa inaan uga gudubno liiska cuntada.
Waxaan ahay mid ka mid ah kuwa u maleynaya in daqiiqada aad bilowdo ku tababbarka isboortiga aad ku qanacdo dadaal iyo dalab, jawaabta uu bixiyo badhanka ayaa aad uga haboon tan taabaneysa taabashada, xitaa waa ka sii badan tahay hadaad inta badan isticmaasho galoofyada. Sidaa darteed, xalka by Midka uu TomTom sharad ku dhigaa wuxuu ila muuqdaa kan ugu guusha badan.
Shaashadda si fiican ayaa loo akhrin karaa shuruudaha oo dhan, xitaa marka qorraxdu toos u dhacdo mar labaad, kuwa ku tababbara isboorti banaanka laguma niyad jabi doono arrintan.
Waqtigan xaadirka ah, hubaal in badan oo idinka mid ahi isweydiinayaan in TomTom Runner Cardio uu yahay quusin kara biyaha Runtiina waa. Saacadda ayaa la quusin karaa ilaa 50 mitir sidaa darteed waan ku qubeysan karnaa ama ku qubeysan karnaa barkadda annagoo aan ka baqaynin waxyeello. Nasiib darrose, TomTom Runner Cardio waxaa loo qaabeeyey sidii saacad loogu talagalay dadka jecel inay ku ordaan dibedda iyo gudahaba, sidaa darteed waxqabadka qaababka kale ee isboortiga ayaa aad ugu xaddidan la'aanta fursado u heellan oo loogu talagalay dhaqannada sida dabaasha, baaskiil wadista, iwm.
Haddii aan u leexino TomTom Runner Cardio hareeraha, waa marka aan arki karno in saacaddu leedahay dareemayaal indhaha, iyadoo la adeegsanayo labo laydh ah, awood u leh in lagu ogaado isbeddellada ku dhaca maqaarka maqaarkeenna, halkaas, lagala socon karo garaaca wadnaha. The cabirka garaaca wadnaha waa dhakhso oo sax ah, waxay muhiim u tahay tababar tayo leh oo ku saleysan dhammaan shanta aagag garaaca wadnaha.
Ugu dambeyntiina, ogow in batteriga TomTom Runner Cardio uu hayo ilaa saacadaha 8 haddii aan isticmaalno isku xirnaanta GPS iyo kormeerka garaaca wadnaha isla mar. Markuu batterigu dhammaado, waa inaan si fudud ugu xirno saacadda saldhiggeeda saldhigga oo leh xiriir USB waana intaas.
Loogu talagalay in lagu raaxeysto orodka
TomTom Runner Cardio ayaa leh GPS si loo kaydiyo ama loo kiciyo jidadka, kormeerka garaaca wadnaha isku dhafan, isku xirnaanta Bluetooth, feejignaanta gariirka iyo suurtagalnimada in lala jaan qaado adeegga khadka tooska ah ee TomTom, kaasoo noo ogolaanaya inaan si buuxda u xakameyno jimicsigeena.
Wax kasta oo kor ku xusan, saacadani waxay siisaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay kuwa tagaya ordo ama soco waxayna rabaan aaladda ugu dhameystiran ee suurtogalka ah.
Thanks to midowga qalabka kombiyuutarka ee barnaamijka 'TomTom software', waan abuuri karnaa jimicsi yool ku saleysan (masaafada, waqtiga, xawaaraha, kalooriyada gubatay) ama shanta aag ee xoogga leh ee sida tooska ah ugu tiirsan isku socodka. Waxaan sidoo kale culeys saari karnaa kalfadhiyadii tababarka ee hore waxaanan isku dayi karnaa inaan hagaajino waqtigeenii hore, wax ay tartamada ugu badani jeclaan lahaayeen
Sidii aan horeyba u sheegnay, mahadsanid afarta-geesood ee aan awoodno dejiso nooca tababarka waxaan dooneynaa inaan sidaas ku sameeyno ilbiriqsiyo gudahood, waxaan bilaabi karnaa diiwaanka xogta markii saacadu ay heshay daboolida GPS, wax aan inta badan qaadanayn wax ka badan dhowr daqiiqo banaanka.
Marka guriga la joogo, waan soo dejisan karnaa dhammaan macluumaadka la soo ururiyey oo waxaan u isticmaali karnaa barxadda TomTom MySports si aad ugu fiirsato.
Ha ku kadsoomin fursadaha smartwatch si aad ugu tababarto isboortiga oo aad sharad ugu dhigto xal sida midka aan kula helno TomTom Runner Cardio.
Qaar badan oo ka mid ah smartwatches ayaan haatan haysan shaashad si fiican looga akhrin karo banaanka, oo aysan la imaan qalabka garaaca garaaca wadnaha, ama aan si toos ah biyuhu u diidi karin. Maqnaanshaha maqnaanshaha GPS xaaladaha badankood ama la'aanta barxad isboorti oo dhab ah oo lagu helo diiwaanno faahfaahsan oo ku saabsan kulamadeena tababarka.
Waxay noqon kartaa in mustaqbalka dhammaan cilladahaas saacadaha casriga ah ee hadda jira la yareyn doono laakiin inta ka horeysa, TomTom Runner Cardio ayaa hadda lagu heli karaa qiime 269 euros.
Xiriir - TomTom Runner Cardio
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Waxaan tijaabinay saacadda TomTom Runner Cardio
Waxaan ogaanay 5-ta sababood ee ugu sareysa ee Facebook u diiday barnaamijyada
Xatooyo Grand Auto V: isbarbardhigga u dhexeeya PS4 iyo PS3